Jiilka saddexaad ee Apple TV wuxuu leeyahay maalmihiisu tiro | Waxaan ka socdaa mac
Javier Porcar | | Apple TV, Noticias, dhowr
Way cadahay in Apple ay ka shaqeysay cusboonaysiinta qalabka inta udhaxeysa sanadkaan iyo sanadka soo socda. Waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto astaanta, oo leh qalabka ugu badan ee suuqa yaala taasna waxaa cadeyn u ah awooda weyn ee ay noogu balan qaadayaan iphone-ka cusub.
Sidaa darteed, ka faa'iideyso haddii aad jeceshahay filimada oo aad jeceshahay inaad kireysato filimada khadka tooska ah, waxaad tahay isticmaale Netflix ah, waxaad si joogto ah u ciyaareysaa fiidiyowyada YouTube, Vimeo, iwm. awood u yeelan karaan inay ku soo iibsadaan qalabkan Dukaanka rasmiga ah ee Apple.
Waa mid aad u adag in Apple ay go'aanka ku gaadhay ha sii wadin iibinta jiilka saddexaad ee Apple TV, inkasta oo ay tahay badeecad hadda qiimaheedu jaban yahay (€ 79). nooca sare wuxuu taageeraa Siri iyo codsiyo aad u tiro badan, isagoo iska dhigaya inuu yahay a xarunta madadaalada guriga, maxaa yeelay maahan oo keliya barnaamijyada bulshada ama telefishanka iyo taageerada fiidiyowga, waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan yeelano ciyaaro cajiib ah. Apple waxay ku talajirtaa jiilka 4aad ee Apple TV inuu maareeyo shaqooyinka HomeKit loogu talagalay xakamaynta gurigeenna telefishanka iyo tan oo dhan qiimaha € 179 iyo € 229 marka loo eego awoodda la doortay.
Waa hagaag waa run in jiilkii 3aad ee Apple TV wuxuu sii joogay Spain kalabarDalka Mareykanka, barnaamijyo badan oo dheeri ah ayaa loo isticmaali karaa, gaar ahaan shabakadaha telefishanka ama adeegyada fiilooyinka, tani waa sida haddii Isbaanish aan ku haysanay barnaamijyo ka yimid shabakadaha Isbaanishka, sida haddii ay joogaan jiilka 4aad ama IOS.
Xaqiiqadu waa tan Shaqaalaha Apple waxay leeyihiin amarro ay kaga takhalusaan jiilka 3aad ee Apple TV khaanadaha ay dhigtaan, maxaa yeelay waxay macaamiisha kala taliyaan iibsashada nooca aasaasiga ah ama waxay u diraan bakhaarada shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Jiilka saddexaad ee Apple TV wuxuu leeyahay maalmihiisa tiro
Had iyo jeer saf inta kale.
Jawaab Merci Durango
Horeyba uxunayd markii ay sifiican usoo baxday hada qiyaasa. Maaha hadiyad ahaan jasiiradaha. Waan rabaa
Jawaab Jose Fco Cast
Siri on Apple TV 4 ee Mexico MA shaqeynayo, sidaa darteed faa'iidada kaliya ee Apple TV 4 ee ka dhanka ah 3 waa kontoroolka fog, taas oo ilama ahan aniga igu filan inaan bixiyo labalaab kaliya si aan u yeesho xakameyn ka duwan.
Waxaan horey u leenahay danab si aan u labalaabno adabtarada danab ka Belkin